Fiyaagaraha kacsi la'aab ayuu leeyahay mustaqbalka
» Fiyaagaraha kacsi la'aab ayuu leeyahay mustaqbalka
Fiyaagara oo ah magaca guud ee loo yaqaano waana magaca lagu iib geeyo suuqyada aduunka waxa uuna ka mid yahay Daawooyinka loogu isticmaal badanyahay sida lagu ogaaday baaritaano lagu sameeyay.
Daawo kastaa waxa ay leedahay magacyo badan sida chemical name, brand name and generic name waxase inta badan la istic maalaa magaca ganacsiga ee brand name loo yaqaano kaas oo ah magaca shirkada soo saartay dawada u gaarka ah. sidaa awgeed magaca Fiyaagara waxa iska leh shirkada caanka ee dawooyinka soo saar ta ee Pfizer pharmaceutical incorporated.
Fiyaagara waa kaniino loo isticmaalo dhanka daahida biyaha gaar ahaan ragga waxa uuna leeyahay dhibaatooyin badan oo ugu danbeyntii kaa dhigay in aad xitaa kacsan weydo sida ay sheegeen dhaqaatiir mudo dheer daba socotay waxa uu yahay Kaniinkaasi.
Waxay ahayd march 1998kii markii ugu horaysay ee suuqyada dawooyinka ay soo gasho dawadani. Ka dib markii ay ansixiyeen hay’ada Food and Drug Administration (FDA).
Sida lagu cadeeeyay cilmi baadhis la soosaaray dhawaan sagaal midh oo kiniin ah (9 tablets) ayaa seconkii kasta la qoraa aduunka korkiisa, waxa kale oo sii dheer inta an dhakhtar uqorin ee layska isticmaal. In ka badan 600,000 (lixboqol oo kun) oo dhakhtar ayaa waxay u tahay dawada koowaad (first choice) ee ay ku daweeyaan xanuunka loo yaqaan ( impotency) xanuunkaasi oo ah awood daro ku timaada xubnaha galmada ee raga.
Soomaaliya ayaa waxaa loo ganacsi keenay wixii ka danbeeyay 2000 halkaasi oo uu keeni jiray Company dawooyinka keeni jiray xiligaasi waxa ayna dadka wada aqoonsadeen wixii ka danbeeyay 2000 xiligaasi oo dalka uu ahaa mid dhanka dhaqaaalaha eber ka ahaa.
Fiyaagara ayaa la ogaaday in uu keeno in xubinta taranka ragga ay ugu danbeyntii liidato ama ay soo kici weydo ayadoona garaamka ama dooseejka uu yahay mid kaalin ka qaata liiditaanka kaniinkaasi oo haatan aduunka si wacan uga ciyaaraha ayna jiraan shirkado badan oo soo saaro.
Anonymous2/28/2012s/c wad sallamantihiin dad inow so diyariyaybarnaamish kan waxan idin wedin ee waxan istacmalmararka qaar cream ama bomato dhiiqo ah waxanaaan mariya ged key ga. Wax kale nah uma mariye besdhalan yaro iyo is ka tijabi ayan u istacmala all xamdullillaahawood igu filan alla waa isiiyi oo ragalimo ah alla aya ku mahadleh taah marka .wallaala yaal wax dhib ma igaga iman karaallaha ima keni bamatadaas.Midkalanah wan idin wey din lahaay kaniini kasameysan gansen iyo multivimin and miniral ayan cawaasiganah waa side malaga yaba in uu ific nen .Waxan idin ka sugaya jawab insha allaah wbl tfqReplyDeleteRG2/28/2012walaal creamka aad isticmaasho ay ku xirantahayt waxa uu yahay, marka dhakhtar la xiriirReplyDeleteAnonymous3/09/2012waar akhyaarta RG, qofku siduu hooyadii ugu eekaan karaa ama aabihii canugu yacnii, mala awooda in loo ekaysiin karo aabihii ama hooyadii oo kale, sida in biyaha ninku la daahoo kale ayaan maqlay ee maxaa ka jira barakalaahu fikum?ReplyDeleteNabil3/14/2012waan idin salamay walal bahda raaxada guurka walal su'aal ayaan qabaa aad u muhiimah sideen msg ahaan idiinku soo diri karayaa pls ?ReplyDeleteRG3/15/2012email:muumin@live.comReplyDeleteAnonymous3/22/2012sc wan idin salamy bahda RG iyo dhamn akhristayashaba su'ashaydu waxay tahay guskaygu markuu fadhiyo wuxuu leegyahy faryaradamarku kacana ilaa suulka da'daydu waa 18y WALIGAYNA MA SINAYSAN waxan si SIKAYSANAYEY 2years ila imikana wan wada plz guskaygu mala dhigma inti loga bahna ama qayrkay oo kale waxyahaba guska koriyana maxaa kamida ah iyo talo DAGALKA QABOW IYO UURKA GABADHAYDA SAMAYN MA KU YEELAN DOOOOOONTA insha alahh JWBReplyDeleteRG3/23/2012walaal haka walwalin waakor doonaa haddii Alle idmo markaad guursatoReplyDeleteAdd commentLoad more...